Banyere - Okwu a
Akara MARKETT bụ Roman Catholic-agụ egwú / songwriter na ndị ozi ala ọzọ. O meela ma kwusaa ozi na North America na mba ofesi.
Ozi ndi ezitere na webusaiti a bu nkpuru nke ekpere na ije ozi. Ntughari ọ bụla nke nwere ihe ụfọdụ nke “mkpughe nkeonwe” ka edobelarị nghọta nke onye nduzi mmụọ nke Mak.
Gaa Leta weebụsaịtị 0 nke Mark ma chọpụta egwu ya na ozi ya:
Amụma nzuzo anyị
Akwụkwọ ozi ịja mma sitere na Bishọp Mark, Ọtụtụ Reverend Mark Hagemoen nke Saskatoon, SK Diocese:
Akwụkwọ ozi si n’aka Bishọp Mark
Ihe ndị a bụ akụkụ nke akwụkwọ Mark, Esemokwu Ikpeazụ... ma kọwaa nkwalite dị n'azụ blog a.
MY ụbọchị dịka onye nta akụkọ telivishọn mechara bịa na njedebe ụbọchị m dị ka onye nkwusa ozioma Katọlik oge niile na onye ọbụ abụ / onye na-ede egwú malitere. Ọ bụ n'oge a nke ije ozi m na mberede ka e nyere m ozi ọhụụ ... nke na-etolite nkwalite na gburugburu nke akwụkwọ a. N'ihi na ị ga-ahụ na agbakwunyere m echiche m na "okwu" nke m nataworo site n'ekpere ma chọpụta na nduzi mmụọ. Ha dị, ma eleghị anya, dị ka obere ọkụ na-atụ aka na Ìhè nke Mkpughe Chineke. Ndị na-esonụ bụ akụkọ iji kọwaa ozi ọhụrụ a n'ihu ...
Ka ọnwa nke asatọ dị n’afọ 2006, m nọdụrụ ala na piano na-agụ otu akụkụ Mass nke “Sanctus” nke m dere: “Nsọ, Nsọ, Nsọ ...” Na mberede, enwere m nnukwu agụụ ịga kpee ekpere n’iru Sakrament nke di ngozi.
Na chọọchị ahụ, amalitere m ikpe Ọfịs (ekpere ndị isi nke Chọọchị na-abụghị nke Mas.) Achọpụtara m ozugbo na "Hymn" bụ otu okwu m ka na - abụ:Nsọ, nsọ, nsọ! Onyenweanyi Chineke Nke puru ime ihe nile ...”Mmụọ m malitere ịdị ndụ. Anọgidere m, na-ekpe ekpere okwu nke onye ọbụ abụ ahụ, “Ana m eweta àjà nsure ọkụ n'ụlọ gị; ọ bụ gị ka m ga-akwụghachi nkwa m kwere ... ”N’ime obi m, ọ gwụrụ nnukwu agụụ ike inyefe onwe m kpam kpam nye Chineke, n’ụzọ ọhụrụ, n’ogo dị omimi. Anọ m na-anụ ekpere nke Mmụọ Nsọ bụ onye “na-arịọsi arịrị nke a na-apụghị ịkọwa akọwa”(Ndị Rom 8:26).
Ka mụ na Onye-nwe na-ekwu okwu, ọ dịka oge na-agbaze. Emere m nkwa nke onwe m nye Ya, oge niile ana m enwe mmetụta nke ịnụ ọkụ n'obi maka mkpụrụ obi. Ya mere, m jụrụ, ma ọ bụrụ uche Ya, maka ikpo okwu ka ukwuu nke m ga-esi kesaa ozi ọma ahụ. Echere m ụwa dum echiche! (Dị ka onye nkwusa ozioma, gịnị kpatara m ga-eji chọọ ịtụ ụgbụ m naanị obere site n'akụkụ ụsọ mmiri? Achọrọ m ịdọrọ ya gafee oke osimiri ahụ dum!) Na mberede, ọ dị ka a ga-asị na Chineke na-aza ekpere ndị Ọfịs ahụ. Ọgụgụ Mbụ sitere na akwụkwọ Aịsaịa ma kpọọ ya, “Oku nke onye amụma Aịsaịa”.
Seraphim guzo n’elu; onye ọ bula n’ime ha nwere nkù isi: abua ka o ji ekpuchi iru-ya, abua abua ka o ji ekpuchi ukwu-ya abua, abua ka o ji efe n’elu. “Nsọ, nsọ, nsọ, ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha di!” ha tikuru ibe-ha ákwá. ” (Aịsaịa 6: 2-3)
Anọgidere m na-agụ otu Seraphim si efega Aịsaịa ahụ, na-emetụ egbugbere ọnụ ya iche iche, na-edo ọnụ ya maka ọrụ dị n’ihu. “Onye ka m ga-eziga? Willnye ga-agaara anyị?Aisaia we za, si,Lee m, ziga m!”Ọzọkwa, ọ dị ka a ga-asị na m malitere mkparịta ụka mbụ m na mberede. Ọgụgụ ahụ gara n'ihu na-ekwu na a ga-eziga Aịsaịa gaa na ndị na-ege ntị ma ha anaghị aghọta, ndị na-ele anya mana ha anaghị ahụ ihe ọ bụla. Akwụkwọ Nsọ yiri ka ọ na-egosi na a ga-agwọ ndị ahụ ozugbo ha gere ntị ma lee anya. Ma olee mgbe, ma ọ bụ “ogologo ole?Ka Aịsaịa jụrụ. Jehova we za, si,Ruo mgbe obodo ndị ahụ tọgbọrọ n’efu, n’enweghị ndị bi ha, ụlọ, n’enweghị mmadụ, ụwa tọgbọrọ n’efu.”Nke ahụ bụ mgbe a ga-eweda mmadụ ala ma wedata ya n’ala.
Ọgụgụ nke abụọ sitere na St. John Chrysostom, okwu ndị dị ka a ga-asị na ọ bụ ha na-agwa m okwu:
Are bụ nnu nke ụwa. Ọ bụghị n'ihi onwe gị ka ọ na-ekwu, kama ọ bụ n'ihi ụwa ka e nyefere okwu ahụ n'aka gị. Adịghị m eziga gị n'obodo abụọ ma ọ bụ naanị iri ma ọ bụ iri ma ọ bụ iri abụọ, ọ bụghị otu mba, dịka m zigara ndị amụma oge ochie, kama gafere ala na oke osimiri, na ụwa dum. Na ụwa a nọ n'ọnọdụ nhụjuanya ... ọ chọrọ n'aka ndị ikom a omume ọma ndị bara uru na ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha ga-ebu ibu nke ọtụtụ ... ha ga-abụ ndị nkuzi ọ bụghị naanị maka Palestine kamakwa maka dum ụwa. Ya ejula gị anya, yabụ, sị, na m na-agwa gị okwu na-abụghị ndị ọzọ ma na-etinye gị na ụlọ ọrụ dị egwu ... Mgbe ha na-akọcha gị ma na-akpagbu gị ma na-ebo gị ebubo maka ihe ọjọọ ọ bụla, ha nwere ike ịtụ ụjọ ịbịa n'ihu. Ya mere, o kwuru, sị: “Ọ gwụla ma ị dị njikere maka ụdị ihe ahụ, ọ bụ n'efu ka m họọrọ gị. Nkọcha ga-abụrịrị oke gị ma ha agaghị emerụ gị ahụ ma bụrụ naanị ịgba akaebe na ị ga-anọgidesi ike. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị tụghị ụjọ iji ịdị ike nke ozi gị na-achọ, ọnọdụ gị ga-aka njọ. ” - Ọgụ. John Chrysostom, Iwu nke awa, Vol. IV, peeji nke 120-122
Ikpe a mara m tụrụ m n'anya n'ezie, n'ihi na n'abalị gara aga, anọ m na-echegbu onwe m banyere ụjọ m na-atụ ime nkwusa ebe ọ bụ na enweghị m olu olu, enweghị akara mmụta okpukpe, na ụmụaka [asatọ]. Ma a zara egwu a na Nzaghachi ndị a: “Unu ga-anata ike mgbe Mụọ Nsọ ga-abịakwasị gị — ma unu ga-abụ ndị-àmà m ruo nsọtụ ụwa.”
N'oge a, ihe juru m anya dịka Onye-nwe-anyị na-agwa m: na a na-akpọ m oku ka m nwee ike idozi amụma. N'aka nke ọzọ, echere m na ọ bụ mpako kama iche ụdị ihe ahụ. N'aka nke ọzọ, enweghị m ike ịkọwapụta onyinye karịrị ike mmadụ nke na-arụ n'ime m.
Isi m na-atụgharị na obi m ọkụ, m lara n'ụlọ meghee Bible m na-agụ:
M ga-eguzo n’ebe nche m, guzo n’elu mgbidi ahụ, lezie anya iji hụ ihe ọ ga-agwa m, na azịza ọ ga-enye mkpesa m. (Habb 2: 1)
Nke a bụ eziokwu bụ ihe Pope John Paul II jụrụ anyị bụ ndị ntorobịa mgbe anyị sooro ya na atbọchị Ndị Ntorobịa Worldwa na Toronto, Canada, na 2002:
N’ime abalị anyị nwere ike ịtụ ụjọ ma nwee ntụkwasị obi, anyị n’echeghị echiche na-echere ọbịbịa nke chi ọbụbọ. Ezigbo ndị na-eto eto, ọ dịịrị unu ịbụ ndị nche ụtụtụ (cf 21: 11-12) bụ ndị na-ekwupụta ọbịbịa nke anyanwụ bụ onye bilitere Kraịst! - Ozi nke Nna Dị Nsọ nye Ndị Ntorobịa nke ,wa, XVII World Youth Day, n. 3
Youngmụaka egosila na ha bụ maka Rome na maka Churchka nye onyinye pụrụ iche nke mmụọ nke Chukwu… egbughi m oge ịrịọ ha ka ha họrọ oke okwukwe na ndụ ma gosi ha ọrụ dị egwu: ịbụ “ụtụtụ. ndị nche ”n'isi mmalite nke narị afọ iri ọhụrụ. —PỌPỌ JOHN PAUL II, Novo Millenio Inuent, N.9
Oku a ka anyi "lelee" ka Pope Benedict kwusiri ike n'Australia mgbe o gwara ndi ntorobia ka ha buru ndi ozi ohuru:
N’ike mmụọ nsọ nyere ha, ma na-elekwasị anya n’ọhụhụ nke okwukwe, a na-akpọ ọgbọ ọhụrụ nke Ndị Kraịst ka ha nyere aka wulite ụwa ebe a nabatara onyinye nke ndụ nke Chineke, kwanyere ya ugwu ma jiri ya kpọrọ ihe — a jụghị ya, tụọ ụjọ dịka iyi egwu, ma bibie ya. Oge ọhụụ nke ịhụnanya anaghị eji anyaukwu ma ọ bụ na-achọ ọdịmma onwe ya, kama ọ dị ọcha, kwesịrị ntụkwasị obi ma nwekwaa onwe ya n'efu, meghere ndị ọzọ, kwanyere ugwu ha ùgwù, na-achọ ihe ọma ha, na-egosipụta ọ joyụ na ịma mma. Ọgbọ ọhụụ nke olile-anya na-atọhapụ anyị n’adaghị ala ala, enweghị mmasị, na imikpu onwe nke na-egbu mkpụrụ obi anyị ma mebie mmekọrịta anyị. Ezigbo ndị enyi m, Onye-nwe-anyị na-arịọ unu ka unu bụrụ ndị amụma nke ọgbọ ọhụrụ a ... —POPE BENEDICT XVI, Homily, Youthbọchị Ndị Ntorobịa ,wa, Sydney, Australia, July 20, 2008
N'ikpeazụ, enwere m agụụ imeghe Catechism — akwụkwọ dị peeji 904 — na, n'amaghị ihe m ga-achọta, atụgharịrị m nke a ozugbo:
Na “otu na otu” ha na Chineke, ndị amụma na-enweta ìhè na ume maka njem ha. Ekpere ha abụghị ọsọ nke ụwa a na-ekwesịghị ntụkwasị obi, kama ọ bụ ị atta ntị n'Okwu Chineke. Mgbe ụfọdụ ekpere ha bụ arụmụka ma ọ bụ mkpesa, mana ọ na-abụkarị arịrịọ nke na-echere ma na-akwado maka ntinye nke Onye Nzọpụta nke Chineke, Onye-nwe akụkọ ihe mere eme. -Catechism nke Chọọchị Katọlik (CCC), 2584, n’okpuru isiokwu: “Elaija na ndi amuma na nchegharị nke obi”
Ihe mere m ji ede ihe edere n’elu abụghị ikwupụta na m bụ onye amụma. Abụm nanị onye egwu, nna, na onye na-eso ụzọ ọkwa ọkwa ahụ sitere na Nazaret. Ma ọ bụ dị ka onye nduzi ime mmụọ nke ihe odide ndị a na-ekwu, abụ m nanị “Onye ozi Chineke dị nta.” Site na ike nke ahụmịhe a tupu Sakrament nke a gọziri agọzi, na mmesi obi ike niile nke m natara site na ntụzi-aka nke mụọ, amalitere m ịde dịka okwu nile nke etinyere n’obi m siri dabere na ihe m nwere ike ịhụ n’elu “mgbidi”
Iwu nne anyi di aso nyere St. Catherine Labouré na achikota ihe kachasi nma nke onwe m:
Ga-ahụ ihe ụfọdụ; nye akụkọ banyere ihe ị hụrụ na ihe ị nụrụ. Will ga-enweta mmụọ nsọ n’ekpere gị; kwue ihe m gwara gị na ihe ị ga-aghọta n’ekpere gị. - Ọgụ. Catherine, Nchekwa onwe, February 7th, 1856, Dirvin, Saint Catherine Labouré, Archives of the Daughters of Charity, Paris, France; peeji nke 84
Ndị amụma, ezigbo ndị amụma, ndị tinyere ndụ ha n'ihe ize ndụ maka ịkpọsa “eziokwu ahụ”
ọ bụrụgodị na ahụ erughị ala, ọ bụrụgodị na "ọ dịghị atọ ụtọ ige ntị" ...
“Ezi onye amụma bụ onye pụrụ ibe ákwá maka ndị mmadụ
na ikwu ihe siri ike mgbe ọ dị mkpa. "
Chọọchị chọrọ ndị amụma. Kindsdị ndị amụma a.
"M ga-ekwu ọzọ: Ọ chọrọ anyị niile ibu amuma.
—POPE FRANCIS, Homily, Santa Marta; Eprel 17th, 2018; Onye ndu Vatican